यसरी लिक भयो भिडियो, हेर्नुस्, नेपालमा हलचल मच्चाएको जापानमा खिचिएको यौन काण्ड ! – PathivaraOnline
Home > प्रवास > यसरी लिक भयो भिडियो, हेर्नुस्, नेपालमा हलचल मच्चाएको जापानमा खिचिएको यौन काण्ड !
admin February 24, 2019 प्रवास	0
काठमाडौँ । यसरी लिक भयो भिडियो । यी दुवैको दोस्रो भिडियो हेर्दा जिस्केर आफैँले भिडियो बनाए पनि आफैँले लिक गरेको देखिन्न । युवकले आफ्नो र युवतीको आइफोनबाट भिडियो खिचेको देखिन्छ । युवतीको आइफोनमा रहेको भिडियो लिक भएको दाबी आइरहेको छ ।युवतीलाई उनको साथीले एप्पल आइडी बनाइदिएको र सोबारे ती साथी जानकार भएकाले साथीबाट यो लिक भएको दाबी पनि बजारमा आएका छन् ।
पुरा भएन सुदिपको चाहना, बैदेशिक राेजगारीका लागि युएई पुगेका सुदिप सधैको लागि अस्ताए !
परिवारलाई खुशी दिउँला भन्दै रोजगारीका लागि कुवेत पुगेका एक नेपाली यसरी अस्ताए…